2016 – Family Of Films
Master (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Master (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.7/10 BookmyShow 75% Google User 91 % Genre: Action, Crime, Thriller Run Time:2hours 23 mins ကိုရီးယားအက်ရှင်ကားကြိုက်သူများအတွက် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ…. Master (2016) သို့ Ma-seu-teo (original title) သည် IMDb 6.7 Rotten Tomatoes 75% Google User 91% ဒါရိုက်တာ Ui-seok Jo ရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Byung-hun Lee, Dong-won Gang, Woo-bin Kim တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Crime, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….. ကိုရီးယားအကြီးမားဆုံးကွန်ယက် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့က အကျင့်ပျက်ချစားမှု ကွန်ယက်နဲ့ အောက်ခြေက ပူးပေါင်းကြံစည်များကို ထင်ရှားဖော်ထုတ်စေခဲ့သော ကိုရီးယားအက်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားမို့ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦးခင်ဗျ…. Reviewed By ...
Pitchfork (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Google User 51 % Genre: Horror Run Time: 1 hour 34 mins Horror Movie ချစ်သူများအတွက် အရင်က ကျွန်တော်ပြန်ထားတဲ့ကားဟောင်းလေးတစ်ကား ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… လူသတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောက်တတ်ရင် မကြည့်ပါနဲ့လို့ ကြိုတင်မှာထားပါရစေ… Pitchfork (2016) သည် Google User 51% ဒါရိုက်တာ Glenn Douglas Packard ရိုက်ကူးထား၍ Darryl F. Gariglio, Glenn Douglas Packard တို့က ဇာတ်ကောင်ဖန်တီး ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Daniel Wilkinson, Brian Raetz, Lindsey Nicole တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Horror ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. မိမိရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြ ဝန်ခံပြီးတဲ့နောက် ဟန်တာသည် သူရဲ့ ...
Ekkadiki Pothavu Chinnavada (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Ekkadiki Pothavu Chinnavada (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDB rating:7.6/10 Genre:Comedy,Fantasy,Romance Run Time:140 mins Released Date:18th Nov 2016 Language:Telegu ဒီတစ်​ခါ​တော့ အိန္ဒိယ​တောင်​ပိုင်း Kollywood ကား​လေးတစ်​ကား တင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပြန်​ပါပြီ. . . ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း. . . အာဂျွန်းဆိုတဲ့​ကောင်​​လေး တစ်​​ယောက်​ သူ့ရဲ့စာ​မေးပွဲရက်​မှာ စာ​မေးပွဲခန်းထဲက အမြန်​​ပေးထွက်​ပြီး သူတို့ မြို့က တရားရုံးမှာ သူ့ချစ်​သူ​ကောင်​မ​လေးနဲ့ ရုံးတက်​လက်​မှတ်​ထိုးဖို့ လာခဲ့ရာက. . .စပါတယ်​. . . အချိန်​ကြာမြင့်​စွာ ​စောင့်​ဆိုင်းခဲ့​ပေမယ့်​ သတို့ သမီး​လောင်း ​ပေါ်မလာတဲ့အခါ အရှက်​ကြီး ရှက်​ရတဲ့အတွက်​ ​စောင့်​ဆိုင်းရတဲ့ အလုပ်​ကို မုန်းတီးသွားတယ်​ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ ​ဖြေသိမ့်​ရင်း ဘဝကို ပြန်​​ဆောက်​တည်​ပြီး ​နေလာခဲ့ချိန်​ သူ​စောက်​​ရှောက်​လာခဲ့တဲ့ သူ့သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​ရဲ့အကို ကီ​ရှောဆိုသူ စိတ်​မူမမှန်​လို့ စိတ္တဇ​ဆေးရုံကို သွားပြချိန်​. . . ကီ​ရှောဟာ စိတ်​မူမှန်​တာမဟုတ်​ပဲ ပ​ယောဂ ပူးကပ်​နေမှန်းသိလိုက်​ရတယ်​ ပိုဆိုးတာက ကီ​ရှောကိုကြည့်​ပြီး ဆွာမိတစ်​​ယောက်​က အာဂျွန်းရဲ့အနာဂါတ်​ကိုပါ ပ​ဟေဠိဆန်​ဆန်​ ​ပြောဆိုပြီး ​ပျောက်​သွားတာပါပဲ ကီ​ရှောရဲ့ ​ရောဂါ​ပျောက်​ချင်​ရင်​. . . ကာရယ်​လာမှာရှိတဲ့ ဘုရား​ကျောင်းတစ်​ခုမှာ သွား​ရောက်​ကုသရမတဲ့. . ...
Railroad Tigers (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Railroad Tigers (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 5.9/10 Google User : 87 % Genre: Action, Comedy, War Run Time:2hours4mins Railroad Tigers (2016) သည် IMDb 5.9 Google User 87% ဒါရိုက်တာ Ding Sheng က ရိုက်ကူးထား၍ Alex Jia, He Keke တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jackie Chan, Jaycee Chan, Zitao Huang တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Comedy, War ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… ၁၉၄၁ အချိန်က တရုတ်နိုင်ငံက မီးရထားသံလမ်းအလုပ်သမားလေးတစ်ဦးက ဆင်းရဲသားတွေအတွက် အစားအစာရဖို့ ဂျပန်တွေကို ပုန်ကန်တဲ့ ...
Princess Hours Korea TV series(2016-) မြန်မာစာတန်းထိုး
Princess Hours Korea TV series(2016-) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.9/10 Google User 91% Genre: Comedy, Romance Run Time : 1 hour Princess Hours Korea TV series(2016-) သည် IMDb 7.9 Google User 91 % ရထားသော episode 24 ပိုင်းပါရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင် Eun-hye Yun, Ji-hun Ju, Ji-hyo Song တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Romance ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ငယ်ရွယ်နုပျိုချေမောလှပတဲ့ အနုပညာကျောင်းသူလေးနဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ မင်းသားလေးတို့ ချစ်ကြိုက်မေတ္တာမျှမိရာမှာ အချစ် ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လား နိုင်ငံရေးသဘောတရားများပါထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးမို့ ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျ…. Reviewed by-Win Kyaw Thu Fixed by - ...
Monster Trucks (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Monster Trucks (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 5.7/10 Google User : 79 % Genre: Action, Adventure, Comedy Run Time: 1 hour 44 mins Monster Trucks (2016) သည် IMDb 5.7 Google User 79 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Chris Wedge က ရိုက်ကူးထား၍ Derek Connolly , Matthew Robinson တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Lucas Till, Jane Levy, Thomas Lennon တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. သေးငယ်တဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ဆီတွေကို စားပြီးနေတဲ့ ...
Trivisa (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Trivisa (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.9/10 Genre: Crime, Drama Run Time: 1 hour 37 mins Trivisa (2016) သည် IMDb 6.9 ရထားသော ဒါရိုက်တာ Jevons Au, Frank Hui တို့က ရိုက်ကူးထား၍ Tin Shu Mak , Man Hong Lung တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Richie Jen, Jordan Chan, Ka Tung Lam တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Crime, Drama ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ၁၉၉၇ အစောပိုင်းကလာများ လူဆိုးဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင် များဖြစ်ကြသော mobsters Kwai Ching-hung, Yip Kwok-foon တို့ Cheuk Tze-keung ...
Project 12 : The Bunker (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Project 12 : The Bunker (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time : 1 hour 37 minutes Project 12 : The Bunker (2016) သည် ဒါရိုက်တာ Jaime Falero က ရိုက်ကူးထား၍ Joaquin Sanchez, Jaime Falero ကိုယ်တိုင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် James Cosmo, Joaquin Sahnchez, Natasha Alam တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ရှုရှသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့သည် သမိုင်းကို ပြောင်းလဲရန် အန္တရာယ်ကြီးသော စီမံကိန်းတစ်ခု ဒီဇိုင်းထွင်ခဲ့သည်…သူတို့ရဲ့ တီထွင်မှု မအောင်မြင်ဘဲ လူသားအမဲလိုက်သလို ဖြစ်လာသောအခါ ဘယ်လိုထူးဆန်းအံ့သြရင်ထိတ်ဖွယ်တွေဖြစ်လာမလဲ ဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… အခက်အခဲများကြားက ဖားလေးတစ်ကောင်ရဲ့ ...
The Light Between Oceans (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Light Between Oceans (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.2/10 Rotten Tomatoes : 59% Google User : 84% Genre: Drama, Romance Run Time :2hours 13 minutes လူသူမရှိတဲ့ မီးပြတိုက်က မိသားစုလေးရဲ့ဘဝ ဘယ်လိုနေမလဲ သိချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ…. The Light Between Oceans (2016) သည် IMDb 7.2 Rotten Tomatoes 59% Google User 84 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Derek Cianfrance ရိုက်ကူးထား၍ Derek Cianfrance က M.L. Stedman ရေးထားသော ဝတ္ထုကို သရုပ်ဆောင် Michael Fassbender, Alicia Vikander, ...
Kubo and the Two Strings (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Kubo and the Two Strings (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.8/10 Rotten Tomatoes : 97% Google User :92% Genre: Action, Crime, Drama Run Time: 1 hour 41 mins Kubo and the Two Strings (2016) သည် IMDb 7.8 Rotten Tomatoes 97% Google User 92 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Travis Knight က ရိုက်ကူးထား၍ Marc Haimes, Chris Butler တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Charlize Theron, Art Parkinson, Matthew McConaughey တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, ...
London Has Fallen (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
London Has Fallen (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings:5.9/10 Google User : 76% Genre: Action, Crime, Drama Run Time: 1 hour 39 mins London Has Fallen (2016) သည် IMDb 5.9 Google User 76 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Babak Najafi က ရိုက်ကူးထား၍ Creighton Rothenberger , Katrin Benedikt တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော | | Action, Crime, Drama ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လန်ဒန်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဈာပနာတွင် တက်ရောက်လာသူး ခေါင်းဆောင်အားလုံးကို ...
Doctor Strange (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Doctor Strange (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings:7.5/10 Rotten Tomatoes 89% Google User : 91% Genre: Action, Adventure, Fantasy Run Time: 1 hour 55 mins Doctor Strange (2016) သည် IMDb 7.5 Rotten Tomatoes 89% Google User 91% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Scott Derrickson က ရိုက်ကူးထား၍ Jon Spaihts, Scott Derrickson တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြားနားချက်ခရီးတစ်ခု ...
Underworld: Blood Wars (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Underworld: Blood Wars (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings:5.8/10 Google User : 83% Genre: Action, Adventure, Fantasy Run Time: 91mins Underworld: Blood Wars (2016) သည် IMDb 5.8 Google User 83% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Anna Foerster က ရိုက်ကူးထား၍ Cory Goodman , Kyle Ward တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ.. သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်များကို သုတ်သင်သူ, Selene (Kate Beckinsale) သည် Lycan လူမျိုးစုနဲ့ သူမကို ...
Passengers (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Passengers (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.0/10 Rotten Tomatoes : 30% Genre: Drama, Sci-Fi, Thriller Run Time : 1 hour 56 minutes Passengers (2016) သည် IMDb 7.0 Rotten Tomatoes 30% Google User 88% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Morten Tyldum က ရိုက်ကူးထား၍ Jon Spaihts က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Sci-Fi, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ.. အလွန်ဝေးလံသော ဂြိုလ်နေရာတစ်ခုကို ပို့ဆောင်ပေးနေသော အာကာသယဉ်တစ်စင်းသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတွေကို ပို့ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ...
Train to Busan (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Train to Busan (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.5/10 Rotten Tomatoes : 95% Genre: Action, Drama, Horror Run Time : 1 hour 58 minutes Train to Busan (2016) သည် IMDb 7.5 Rotten Tomaotes 95% Google User 95% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Sang-ho Yeon ရိုက်ကူးထားပြီး Joo-Suk Park နဲ့ Sang-ho Yeon တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာံသရုပ်ဆောင် Yoo Gong, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Drama, Horror ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….. Zombie ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တောင်ကိုရီးယားတစ်နိုင်ငံလုံး ပြန့်နှံကူးစက်ချိန်မှာ ဆိုးလ်မှ ဘူစန်သို့ သွားတဲ့ ရထားပေါ်က ...
Ben-Hur(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 5.7/10 Rotten Tomatoes : 54% Genre: Action, Adventure, Drama Run Time :2hours3minutes Ben-Hur(2016) သည် IMDb 5.7 Rotten Tomaotes 54% Google User 79% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Timur Bekmambetov ရိုက်ကူးထားပြီး Lew Wallace နဲ့ Keith R. Clarke တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Jack Huston, Toby Kebbell, Rodrigo Santoro တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure,Drama ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….. Judah Ben-Hur ဟာ ရိုမန်စစ်တပ်က အရာရှိ သူရဲ့ မွေးစားအစ်ကိုက နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနဲ့ မှားယွင်းစွပ်စွဲခံရတဲ့ ...